Translate jahvinih from Croatian to Burmese - MyMemory
Results for jahvinih translation from Croatian to Burmese
Spominjem se djela Jahvinih, sjeæam se tvojih pradavnih èudesa.
ပြုတော်မူသမျှတို့ကို ဆင်ခြင်၍စီရင်တော်မူ သော အရာတို့ကို မြွက်ဆိုပါမည်။
Ali je za njim uao sveæenik Azarja i s njim osamdeset Jahvinih sveæenika, èestitih ljudi.
ယဇ်ပုရောဟိတ်အာဇရိသည် ရဲရင့်ခြင်းသတ္တိ ရှိသော ထာဝရဘုရား၏ အမှုတော်ထမ်းယဇ်ပုရောဟိတ် ရှစ်ကျိပ်တို့နှင့်တကွ၊ ရှင်ဘုရင်ဩဇိနောက်တော်သို့ လိုက်၍၊
Zato se veli u "Knjizi Jahvinih vojni": "Vaheb kod Sufe i doline arnonske
ထိုသို့နှင့်အညီ၊ ထာဝရဘုရားစစ်တိုက်စာ၌ကား၊ ဇာရက်အရပ်၊ သုပအရပ်၊ အာနုန်ချောင်းတို့၊
Da, sudit æe Jahve ognjem i maèem svakom smrtniku: pobijenih Jahvinih mnotvo æe biti.
ထာဝရဘုရားသည် မီးနှင့်ထားအားဖြင့်၊ လူသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကို အပြစ်ပေးတော်မူ၍၊ ထာဝရ ဘုရားကွပ်မျက်တော်မူသော သူတို့သည် များကြလိမ့်မည်။
Neæe se zalud muèiti i neæe raðati za smrt preranu, jer æe oni s potomcima svojim biti rod blagoslovljenika Jahvinih.
ငါ့ကျွန်ပရောဖက်တို့ကို သတ်သောအပြစ်၊ ထာဝရဘုရား၏ ပရောဖက်အပေါင်းကို သတ်သော အပြစ်အလျောက်၊ ယေဇဗေလ၌ ငါဒဏ်ပေးမည် အကြောင်း၊ သင်သည် သင့်သခင်အာဟပ်အမျိုးကို လုပ်ကြံရမည်။
da bi njima stavio na kunju Izraela: hoæe li se ili neæe drati Jahvinih putova kao to ih se drahu oci njihovi.
သူတို့ ဘိုးဘေးတို့သည် ထာဝရဘုရား၏လမ်းတော်သို့ လိုက်ခြင်းငှါ စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ သူတို့သည် စောင့်ရှောက်မည်လော၊ မစောင့်ရှောက်လောဟု ကျန်သေးသော လူမျိုးအားဖြင့် ဣသရေလအမျိုးကို ငါစုံစမ်းမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီ၊
Bilo ih je, s njihovom braæom, uvjebanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vjetaka.
ထိုသူတို့နှင့်တကွ ထာဝရဘုရား၏သီချင်းကို သင်၍ လေ့ကျက်သော ညီအစ်ကိုပေါင်းတားနှစ်ရာ ရှစ်ကျိပ်ရှစ်ယောက်တည်း။
jer nisi posluao rijeèi Jahvinih i jer nisi izvrio njegova estokog gnjeva na Amaleku: stoga ti je Jahve danas ovako uèinio.
အကြောင်းမူကား၊ သင်သည် ထာဝရဘုရား၏ စကားတော်ကို နားမထောင်။ ပြင်းစွာသော အမျက်ကို အာမလက်အမျိုး၌ မစီရင်သောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် ဤအမှုကို ယနေ့ သင်၌ ရောက်စေတော် မူပြီ။
Èinio je to je zlo u oèima Jahve, njegova Boga; nije se ponizio pred prorokom Jeremijom, koji mu je govorio iz Jahvinih usta,
ထိုမင်းသည်လည်း၊ မိမိဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ပြု၏။ ထာဝရဘုရား၏ အမိန့် တော်ကို ဆင့်ဆိုသော ပရောဖက်ယေရမိရှေ့မှာ ကိုယ်ကို မနှိမ့်ချ။
Imat æete rese zato da vas pogled na njih sjeæa svih Jahvinih zapovijedi. Vrite ih,ane zanosite se svojim srcem i svojim oèima, to vas tako lako zavode na bludnost.
ထိုပန်းပွားတို့ကို သင်တို့သည် ကြည့်မြင်သော အခါ၊ ထာဝရဘုရား ပညတ်တော်မူသမျှတို့ကို အောက် မေ့၍ ကျင့်ကြမည်အကြောင်း၊ အထက်က ကိုယ်အလိုသို့ လိုက်လျက်၊ ကိုယ်ဉာဏ်ကို မှီဝဲလျက် မှားယွင်းသကဲ့သို့ မလိုက် မမှီဝဲ၊
Neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. Oni ih imaju blagovati na posveæenu mjestu. To je njemu vrlo svet dio Jahvinih paljenih rtava. To neka bude trajna odredba."
ထိုမုန့်ကို အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည် ပိုင်၍၊ သန့်ရှင်းရာ ဌာနတော်၌ စားရကြမည်။ ထာဝရဘုရား အား မီးဖြင့်ပြုသော ပူဇော်သက္ကာထဲက ထိုမုန့်သည်၊ ထာဝရပညတ်တော်အတိုင်း၊ အာရုန်အဖို့ အလွန်သန့်ရှင်းသော အရာဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Ne sluajte rijeèi proroka: oni vas obmanjuju, objavljuju viðenja srca svoga,ane to dolazi iz usta Jahvinih;
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ပရောဖက်ပြု၍ သင်တို့အား ဟောတတ်သော ဆရာတို့၏ စကားကို နားမထောင် ကြနှင့်။ သူတို့သည် သင်တို့အား အချည်းနှီးဟောတတ် ကြ၏။ ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်တော်ထွက်သို့မလိုက်၊ ကိုယ်အလိုအလျောက် ရူပါရုံကို မြင်သည်အတိုင်း ဟောပြောတတ်ကြ၏။
ဒါဝိဒ်သည် ဇိကလတ်မြို့သို့ ရောက်သောအခါ၊ လက်ရဥစ္စာ အချို့ကို မိမိအဆွေခင်ပွန်း၊ ယုဒအမျိုး အသက်ကြီးသူတို့ထံသို့ ပေးလိုက်၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ရန်သူလက်မှရခဲ့သော ဥစ္စာထဲက သင်တို့ အဘို့ လက်ဆောင်ကို ကြည့်လော့ဟုမှာလိုက်၏။
Poniavao te i glaðu morio,aonda te hranio manom - za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci - da ti pokae kako èovjek ne ivi samo o kruhu nego da èovjek ivi o svemu to izlazi iz usta Jahvinih.
ထိုသို့ သင့်ကိုနှိမ့်ချ၍ အငတ်အမွတ်ခံစေတော် မူသောအခါ၊ သင်သည် ကိုယ်တိုင်မသိ၊ သင်၏ဘိုးဘေး မသိဘူးသော မန္နနှင့် ကျွေးမွေးတော်မူသဖြင့်၊ လူသည် မုန့်အားဖြင့်သာ အသက်ကို မွေးရသည်မဟုတ်။ ဘုရား သခင် မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့် အသက်မွေးရသည်ကို သိစေတော်မူ၏။
I oni æe, radosno klièuæi, na vis sionski da se nauiju dobara Jahvinih: ita, ulja, mladog vina, jagnjadi i teladi, dua æe im biti kao vrt navodnjen, nikad vie neæe ginuti.
ထိုကြောင့်အမျိုးသားတို့သည် လာ၍၊ ဇိအုန် တောင်ထိပ်၌ သီချင်းဆိုကြလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား ပြုတော်မူခြင်း ကျေးဇူးတည်းဟူသော ဆန်စပါး၊ စပျစ် ရည်၊ ဆီ၊ သိုးသငယ်၊ နွားသငယ်တို့ကို ရအံ့သောငှါ စည်းဝေးကြလိမ့်မည်။ သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်သည် ရေ လောင်းသော ဥယျာဉ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍၊ နောက်တဖန် ညှိုးငယ် ခြင်းမရှိရ။
Neæe uspjeti oruje protiv tebe skovano. Dokazat æe da je zao svaki jezik to na te udari na sudu. To je batina slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene" - rijeè je Jahvina.
သင့်တဘက်၌ လုပ်သောလက်နက် တစုံတခုမျှ အထမမြောက်ရ။ သင့်ကိုတရား တွေ့သောသူ မည်သည် ကား၊ အရှုံးခံရလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား၏ ကျွန်တို့သည် ထိုသို့သော အမွေကို ခံရ၍၊ ငါ့ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရကြလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။
Poèetak rijeèi Jahvinih Hoei. Jahve reèe Hoei: "Idi, oeni se bludnicom i izrodi djecu bludnièku, jer se zemlja bludu odala, odmetnuvi se od Jahve!"
သင်သွား၍ ပြည်တန်ဆာမိန်းမနှင့်တကွ သူဘွား မြင်သော သားသမီးတို့ကို သိမ်းပိုက်လော့။ အကြောင်း မူကား၊ ပြည်သားတို့သည် ထာဝရဘုရားကုစွန့်ပစ်၍ အထပ်ထပ်မှားယွင်းကြပြီဟု ဟောရှေအား မှာထားတော်မူ သည်အတိုင်း၊
virudharthi shabd for pull in hindi (English>Gujarati)bon souire (French>English)net amount (English>Hindi)lymphoblasts (English>Greek)meri yaad aa rahi he (Hindi>English)değmeyecek (Turkish>German)la descrizione delle persone (Italian>English)berapa hari awak di sini (Malay>English)kalagayang (Tagalog>English)varioliformis (Danish>Latin)toshio nakamura (English>French)solventnosti (Serbian>English)transfronterizas (Spanish>Czech)pont flottant (French>Dutch)tjänarinna (Swedish>Burmese)glissent (French>Latin)alipowaona (Swahili>Coptic)füüsikaliste (Estonian>Italian)ddyddiad (Welsh>Uzbek)kya aap ghar aa gaye (Hindi>English)压力 (Chinese (Simplified)>Malay)bumalik sa dating masamang bisyo (Tagalog>English)buo ako pero may kulang pa (Tagalog>English)folsav meghat (Hungarian>English)onschendbaarheid (Dutch>French)